I-A-1 ~ I-single Arch Rubber Exp ...
I-A-2 ~ Double Arch Rubber Exp ...
I-A-3 ~ Wide Arch Rubber Expan ...
I-A-1 ~ I-single Arch Rubber Expension Joint
Umkhiqizo we-single-arch unganciphisa ukudlidliza nomsindo, futhi ongaxazulula ukunyakaza kwe-axial / lateral / angular ukunyakaza / izinkinga ze-eccentric. Ukuqiniswa kongqimba lwezindandatho ngezintambo zikaNaylon futhi nasemikhawulweni yomibili izindandatho zensimbi. Imisebe yensimbi entantayo iqhutshwa ngokusho kwe-DIN, ANSI, BS, JIS namanye amazinga. Uma umfutho wamapayipi uphakeme kakhulu, amabhuzu aqinisiwe kufanele ahlanganiswe ndawonye nama-flanges.
I-A-9 ~ Eminye imikhiqizo
I-Rubber gasket ine-oli yokumelana, i-acid ne-alkali ukumelana, ukumelana nokubanda nokushisa, ukumelana nokuguga nezinye izakhiwo. Ngokusekelwe kwinhloso ehlukile yokusebenzisa, impahla ye-gasket yerabha yehlukile. Singenza ama-gaskets ku-EPDM, Buna, irabha yemvelo. Uma isidingo esikhethekile sezinto ezibonakalayo, singazifinyelela izidingo.
I-A-8 ~ Flanges ezijwayelekile
Ama-elastomers ahlanganiswe nama-flanges wokuguga, ngamazinga ahlukene nezingcindezi ezihlukile. Kwesinye isikhathi, abathengi badinga ukuthi sibathengele, bathunyelwe ndawonye ngamalunga enjoloba.
Isixhumi esingu-A-7 ~ Rubber Pipe Isixhumi
I-Rubber Pipe iyisikhundla sokumelana esimelana nokusingathwa kwensimbi nepayipi lensimbi, kungaba ngobude obuqondile noma lapho kudingeka khona irediyo ebekiwe. I-B-1 Rubber Pipe ingahle isetshenziswe ekudluliseni i-ore, amakhemikhali e-corrosive, isihlabathi, namanye ama-slurries abrasive.
A-6 ~ Ukulawula Amayunithi
Umhlangano weyunithi yokulawula uhlelo lwezinduku ezimbili noma ngaphezulu zokulawula ezibekwe ngakunye kokuhlanganiswa okuhlanganisiwe ukusuka ku-flange kuya ku-flange ukunciphisa ukulimala okungenzeka ekwandisweni kokuhlanganiswa okubangelwa ukuhamba ngokweqile kwepayipi. Imihlangano yentonga yokulawula isethwe ekuphakelweni okuvumelekile okuphezulu kanye / noma ukwakheka kwenhlanganisela futhi izodonsa ingcindezi yokuqina kwengqimba ekhiqizwe kusihlanganisi sokukhulisa. Lapho zisetshenziswa ngale ndlela, ziyinto eyengeziwe yokuphepha, inciphisa ukwehluleka okungenzeka kokulimazeka okuhlanganayo kanye nomonakalo ongaba khona emishini. Amayunithi okulawula azovikela amajoyina ngokwanele, kepha umsebenzisi kufanele aqiniseke ukuthi amandla wefulegi wegesi wepayipi anele ukubekezelela amandla aphelele azohlangana nawo.
Inyunyana ye-A-5 ~ Threaded
Izinyunyana ezisetshenzisiwe Zisetshenziswa Lapho uxhumano lwamapayipi ocubungula ezomnotho uludingeka, ingaphezulu leyenyunyana likhona zombili ezisebenza ngokushisayo kanye ne-electroplating. Zombili iziphetho zinikezwe inyunyana yensimbi ebumbekayo ngentambo yabesifazane noma i-ANSI.
I-A-4 ~ I-Spool Type Rubber Ukunwebisa Ukuhlangana
Uhlobo lwe-rubol elihlanganisiwe luhlobo lokubumba, okuqiniswa ikhola yensimbi entanyeni yomzimba. I-ST stype isebenzisa indandatho yokugcina ukukhanya ukusekela i-flange ebalulekile. I-STF igcwele i-arch, ngama-50% ama-ST avumelekile ukunyakaza, kepha inamanani entwasahlobo amahlandla ama-4 kune-arch eyize.
I-A-3 ~ I-Wide Arch Rubber Expension Joint
Uhlelo olubanzi lwe-arch uhlelo oluhlanganisiwe lokubumba olwenziwe ngokubumbana, ngokuhlanganiswa okuhlanganisiwe futhi ngaphandle kokuqiniswa kwensimbi entanyeni yomzimba. I-Wide arch ivumela ukunyakaza okukhulu namanani entwasahlobo aphansi ngokuqhathanisa nohlobo lwe-spool. I-WA ne-WAF isetshenziselwa ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe kwe-arch enjoloji enobungozi. I-WAF igcwele i-arch, ngamaphesenti angama-50 ukunyakaza okuvunyelwe kwe-WA, kepha inezikhathi ezi-4 zentwasahlobo eziphakeme kune-arch ebanzi.
I-A-2 ~ I-Double Arch Rubber Expension Joint
Imikhiqizo esetshenziswa nge-Double arch isetshenziswa lapho kudingeka khona ukunyakaza okuningi. Uma umfutho wamapayipi uphakeme kakhulu, amabhuzu aqinisiwe kufanele ahlanganiswe ndawonye nama-flanges. Ukuqiniswa kongqimba lwezindandatho ngezintambo zikaNaylon futhi nasemikhawulweni yomibili izindandatho zensimbi. Imisebe yensimbi entantayo iqhutshwa ngokusho kwe-DIN, ANSI, BS, JIS namanye amazinga.